Pageants & Modelling - Zimbo Jam
Pageants & Modelling 07	Jun	Zimbabwean Designer Showcases at Caribbean Fashion Week
If you look at the list of 28 international designers listed on the 2013 Caribbean Fashion Week website, you will see one Sabina Mutsvati (albeit spelt wrongly), who makes history this week by becoming the first Zimbabwean showcase at the prestigious event.
31	May	Zimbabwe Fashion Week Hires SA Production Firm for 2013 Edition
This weekend the 2013 edition of Zimbabwe Fashion Week (ZFW) begins its search for models with a casting session at Sam Levy’s village in Harare run by ‘Group of Creatives’, a South African based company that has vast experiences in the fashion show arena.
18	May	Miss Carnival Pageant Disappoints Written by
The Miss Carnival Zimbabwe pageant held at the Harare International Conference Centre last night, May 17 2013, was a real disappointment in terms of selection of contestants.
12	Feb	Nadine Hahn to represent Zim at Top Model of the World. Written by
Face of Zimbabwe winner, Nadine Hahn is set to represent Zimbabwe on the international pageant scene at this years’ 20th edition of Top Model of the World which is to be held in El Gouna (Egypt) from the 17th to the 31 of March 2013.
US$7,000 Prize Haul for Face of Zimbabwe Winners
Nadine Hahn is Face of Zimbabwe 2012
Face of Zimbabwe Finalists in Their Own Words
Abortion Case - Face of Zimbabwe Supports Model
It’s a Fashion Party on the Roof!
Fadzai Muvuti wins Elite Model Look Zimbabwe